Pixel3မှာပါတဲ့ USB-C Earbuds က ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ
18 Oct 2018 . 5:29 PM
Flagship ဖုန်းတွေမှာ Earbuds တွေထည့်ပေးတယ်ဆိုတာ နည်းနေပါပြီ။ အဲ့ဒီအချက်ထက်ပိုဆိုးတာကတော့ 3.5mm Headphone Port ကို ထည့်မပေးတော့တဲ့အချက်ပါ။ အဲ့ဒီအစား Android ဖုန်းတွေမှာတော့ USB-C ကိုပဲ အားကိုးလာရပါတယ်။
Pixel2with Dongle
Google ရဲ့ Pixel3ဖုန်းတွေမှာလည်း 3.5mm Headphone Port မပါတော့တာကြောင့် USB-C ဖက်ကို ပြောင်းစဉ်းစားပေးလာပါတယ်။ Pixel2ဖုန်းတွေမှာစပြီး 3.5mm Headphone Jack တွေအတွက် Dongle ကိုထည့်ပေးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Earbuds တွေတော့ Pixel2ဖုန်းတွေရဲ့ ဘူးထဲမှာထည့်မပေးခဲ့ပါဘူး။
Google က Pixel3ဖုန်းတွေကို စထုတ်တဲ့အချိန်မှာ အဓိကပြောင်းလဲမှု သုံးခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့ ဖုန်းအတွက် Glass ပြောင်းသုံးလာတာ၊ Pixel3XL မှာ Notch ထည့်ပေးလာတာနဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့အတူ USB-C Pixel Buds တွေကိုထည့်ပေးလာတဲ့အချက်တွေပါ။ Pixel Earbuds တွေမထည့်ပေးခင်မှာ Google ရဲ့ သီးသန့် Wireless Earbuds တွေဖြစ်တဲ့ Pixel Buds တွေရှိပါတယ်။ အခုဘူးထဲမှာ တစ်ခါတည်းပါလာမယ့် USB-C Pixel Earbuds တွေကလည်း အဲ့ဒီ Wireles Pixel Buds တွေကိုမှီငြမ်းပြီးတော့ လုပ်ပေးထားတာပါ။
Pixel Earbuds တွေက အကောင်းဆုံး Earbuds တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ဒီ Pixel Earbuds တွေကို iPhone တွေနဲ့တော့ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Apple က USB-C ပြောင်းပေးလာရင်တော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ Google က စနေပြီဖြစ်တာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျန်တဲ့ Android Flagship ဖုန်းတွေမှာ USB-C Earbuds တွေကို အခုထက်ပိုပြီး တွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။
Pixel Earbuds တွေက ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံး Earbuds တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တာလဲ? ပထမဦးဆုံးပြောစရာရှိတာကတော့ Design ပါ။ Earbuds ဝယ်ဖို့စဉ်းစားသူတိုင်းက နားထဲမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ မြဲအောင်တပ်ထားလို့ရမရဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ Google က Pixel Earbuds တွေကို နားထဲမှာ မြဲအောင်တပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးကို လိုသလိုချိန်ညှိလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်တော့ အသံပါ။ Pixel Earbuds တွေမှာ အသံနဲ့ပတ်သက်ရင် Clean & Smooth ဖြစ်အောင် Tune ပေးထားတာကြောင့် အသံကျယ်ကျယ်နားထောင့်တဲ့အခါတွေမှာပဲ ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိနေမယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။
$30 is still cheap
အဓိက Feature တစ်ခုအနေနဲ့တော့ Pixel Earbuds တွေမှာ Real-Time Translation Feature ကိုထည့်ပေးထားတာပါ။ အဲ့ဒီ Feature ကြောင့် ဘာသာစကားတွေအများကြီးကို တိုက်ရိုက် Translate လုပ်နိုင်တော့မှာပါ။ အဲ့ဒီ Feature ကိုတော့ Google က Wireless Pixel Buds တွေမှာ ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ Pixel Earbuds တွေကတော့ USB-C ပါတဲ့ Android ဖုန်းတော်တော်များများနဲ့ တွဲသုံးနိုင်သလို Apple ရဲ့ USB-C ပါတဲ့ MacBook တွေနဲ့လည်း သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ Google က Pixel3ဘူးတွေထဲမှာထည့်ပေးထားသလို သီးသန့်လည်း ရောင်းပေးဦးမှာပါ။ ရောင်းချမယ့်ဈေးကတော့ $30 ပဲရှိတာကြောင့် ဈေးပေါတဲ့ USB-C Earbuds စာရင်းမှာလည်း ပါဝင်နေဦးမှာပါ။
Pixel3မှာပါတဲ့ USB-C Earbuds က ဘယျလောကျကောငျးသလဲ
Flagship ဖုနျးတှမှော Earbuds တှထေညျ့ပေးတယျဆိုတာ နညျးနပေါပွီ။ အဲ့ဒီအခကျြထကျပိုဆိုးတာကတော့ 3.5mm Headphone Port ကို ထညျ့မပေးတော့တဲ့အခကျြပါ။ အဲ့ဒီအစား Android ဖုနျးတှမှောတော့ USB-C ကိုပဲ အားကိုးလာရပါတယျ။
Google ရဲ့ Pixel3ဖုနျးတှမှောလညျး 3.5mm Headphone Port မပါတော့တာကွောငျ့ USB-C ဖကျကို ပွောငျးစဉျးစားပေးလာပါတယျ။ Pixel2ဖုနျးတှမှောစပွီး 3.5mm Headphone Jack တှအေတှကျ Dongle ကိုထညျ့ပေးလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Earbuds တှတေော့ Pixel2ဖုနျးတှရေဲ့ ဘူးထဲမှာထညျ့မပေးခဲ့ပါဘူး။
Google က Pixel3ဖုနျးတှကေို စထုတျတဲ့အခြိနျမှာ အဓိကပွောငျးလဲမှု သုံးခုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့တာတှကေတော့ ဖုနျးအတှကျ Glass ပွောငျးသုံးလာတာ၊ Pixel3XL မှာ Notch ထညျ့ပေးလာတာနဲ့ ဖုနျးတှနေဲ့အတူ USB-C Pixel Buds တှကေိုထညျ့ပေးလာတဲ့အခကျြတှပေါ။ Pixel Earbuds တှမေထညျ့ပေးခငျမှာ Google ရဲ့ သီးသနျ့ Wireless Earbuds တှဖွေဈတဲ့ Pixel Buds တှရှေိပါတယျ။ အခုဘူးထဲမှာ တဈခါတညျးပါလာမယျ့ USB-C Pixel Earbuds တှကေလညျး အဲ့ဒီ Wireles Pixel Buds တှကေိုမှီငွမျးပွီးတော့ လုပျပေးထားတာပါ။
Pixel Earbuds တှကေ အကောငျးဆုံး Earbuds တှထေဲက တဈခုဖွဈလာတော့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ စိတျမကောငျးစရာတဈခုကတော့ ဒီ Pixel Earbuds တှကေို iPhone တှနေဲ့တော့ သုံးလို့ရမှာမဟုတျပါဘူး။ Apple က USB-C ပွောငျးပေးလာရငျတော့ မပွောတတျပါဘူး။ Google က စနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ ကနျြတဲ့ Android Flagship ဖုနျးတှမှော USB-C Earbuds တှကေို အခုထကျပိုပွီး တှလေ့ာရနိုငျပါတယျ။
Pixel Earbuds တှကေ ဘာကွောငျ့ အကောငျးဆုံး Earbuds တှထေဲက တဈခုဖွဈလာနိုငျတာလဲ? ပထမဦးဆုံးပွောစရာရှိတာကတော့ Design ပါ။ Earbuds ဝယျဖို့စဉျးစားသူတိုငျးက နားထဲမှာအဆငျပွပွေနေဲ့ မွဲအောငျတပျထားလို့ရမရဆိုတာကို စိတျဝငျစားကွပါတယျ။ ဒီအတှကျတော့ Google က Pixel Earbuds တှကေို နားထဲမှာ မွဲအောငျတပျနိုငျဖို့အတှကျ ကွိုးကို လိုသလိုခြိနျညှိလို့ရအောငျ လုပျပေးထားပါတယျ။ နောကျထပျအရေးအကွီးဆုံးအခကျြတော့ အသံပါ။ Pixel Earbuds တှမှော အသံနဲ့ပတျသကျရငျ Clean & Smooth ဖွဈအောငျ Tune ပေးထားတာကွောငျ့ အသံကယျြကယျြနားထောငျ့တဲ့အခါတှမှောပဲ ကွညျကွညျလငျလငျရှိနမေယျဆိုတာ ငွငျးစရာမရှိပါဘူး။
အဓိက Feature တဈခုအနနေဲ့တော့ Pixel Earbuds တှမှော Real-Time Translation Feature ကိုထညျ့ပေးထားတာပါ။ အဲ့ဒီ Feature ကွောငျ့ ဘာသာစကားတှအေမြားကွီးကို တိုကျရိုကျ Translate လုပျနိုငျတော့မှာပါ။ အဲ့ဒီ Feature ကိုတော့ Google က Wireless Pixel Buds တှမှော ပထမဦးဆုံးမိတျဆကျပေးခဲ့တာပါ။ Pixel Earbuds တှကေတော့ USB-C ပါတဲ့ Android ဖုနျးတျောတျောမြားမြားနဲ့ တှဲသုံးနိုငျသလို Apple ရဲ့ USB-C ပါတဲ့ MacBook တှနေဲ့လညျး သုံးလို့ရပါသေးတယျ။ Google က Pixel3ဘူးတှထေဲမှာထညျ့ပေးထားသလို သီးသနျ့လညျး ရောငျးပေးဦးမှာပါ။ ရောငျးခမြယျ့ဈေးကတော့ $30 ပဲရှိတာကွောငျ့ ဈေးပေါတဲ့ USB-C Earbuds စာရငျးမှာလညျး ပါဝငျနဦေးမှာပါ။